‘We declare war on all opposition supporters and protesters’ – - Zimbabwe Today
Home/Business/‘We declare war on all opposition supporters and protesters’ –
‘We declare war on all opposition supporters and protesters’ –
August 29, 2016	Business
Protesters vow to keep demonstrating against Mugabe until he steps down, saying they have ‘nothing to lose’.
Amid mounting unrest in the Zimbabwe, Zanu PF youths have vowed to “violently” crush any anti-government protests as calls by the opposition for 92-year-old President Robert Robert Mugabe and his administration to step down grow louder.
Previous Prophet Makandiwa reveals secrets to his power,why he must always wear a gold watch to be able to prophecy
Next Zanu PF Politician buys $1million plane
Declare war on opposition kuti haunongedzwi? Tochione chinopinda museve nenyuchi!
#Zimbabwe Actor becomes Hollywood celebrity #263chat #hollywood #nigeria #southafrica
MUNASHE KAMBARANI Zimbabwe Badminton player